Ny fampiharana YouTube dia hanisy sivana tsara kokoa ho an'ny karoka | Androidsis
Ny fampiharana YouTube dia manana tsy fitoviana miharihary miaraka amin'ny kinova desktop. Ny kinova finday dia nahazo vaovao marobe ihany koa fa ho an'ny mpampiasa maro dia nanjary tabilao sy tabilao feno ho an'ny mpampiasa izay mandany vola indraindray raha mitazona azy io mankany amin'ny tsy misy afa-tsy fantsona tianao indrindra.
Izao dia rehefa te-hanatsara ny lafiny sasany amin'ilay fampiharana i Google, saingy mifandraika amin'ny valin'ny fikarohana video ataontsika. Ireto safidy vaovao ireto dia natao ho an'ny sivana vaovao izay hampidirina ary izany dia hitovizany amin'ilay kinova birao izay ahafahanao manivana horonan-tsary amin'ny isa, ny maha-zava-dehibe ary ny isa isaina.
Ireo fiasa vaovao ireo dia hita ao amin'ny mitadiava tsipika kaody sasany ao amin'ny kinova farany an'ny fampiharana, ny dikanteny marina indrindra 11.20.54. Na izany na tsy izany, ireo safidy vaovao ho an'ny sivana ireo dia tsy hita na oviana na oviana tamin'ny fampiharana mihitsy, ka tsy fantatra hoe oviana ireo safidy vaovao ireo no azo ampidirina ho an'ny mpampiasa amin'ny kinova farany.
Ao amin'ny kinova desktop an'ny YouTube, misy a karazana safidy sivana lehibe kokoa. Ao amin'ny kinova Android, dia tsy afaka misafidy afa-tsy amin'ny andro, faharetana, karazana atiny na kalitao ianao. Ny tsipika kaody dia manambara izay hampiana: isaina, ilaina, ary naoty.
Ireto safidy telo vaovao ireto amin'ny sivana hanome hery bebe kokoa ho an'ny mpampiasa hifehezana izay karazana horonantsary aseho amin'ny fikarohana ary hiantoka fa ny horonan-tsary malaza sy be mpitia indrindra ihany no aseho amin'ny valiny. Ny tsy fahampiana izay efa nanatrehanay an'ity fampiharana ity izay indraindray dia toa tsy ny YouTube irery no nilaza taminay hoe inona ny karazana horonantsary azonay karohina.
Na eo aza izany, tsy maintsy miandry ny YouTube isika ampidiro ao amin'ny sivana ireo safidy vaovao ireo. Zava-baovao kely izay tonga amin'ny andro fanatsarana ny menio safidy video.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana YouTube dia hampiditra sivana vaovao ao amin'ny valin'ny karoka
Google Maps dia hamela anao hizara ny ETA anao, hiditra mivantana any amin'ny toerana itodiana ary hamorona sarintany misy ny tantaran'ny toerana misy anao